izibane Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
Izitikha eludongeni Izitikha eludongeni
Iifestile zeglasi- ezinoglasi
Iifoto zekhitshi zibomvu
Iifoto zekhitshi ngemibala eethe-ethe
Iifoto zekona ezinjenge-D ezimiselweyo
Iifoto zekhitshi le-fuchsia
Imifanekiso yeekhitshi zesitayela esineemodeli
Imifanekiso ekhitshini emfusa
Imifanekiso yegumbi lokuhlala nekhitshi kunye negumbi lokutyela - imibono yefanitshala
Imifanekiso yegumbi lokuhlala e-brown kunye ne-beige
Imifanekiso yegumbi lokuhlala elimhlophe
Imifanekiso yegumbi lokuhlala elimhlophe, i-beige kunye ne-brown
Iifoto zodonga lweTV-izimvo ezingemva kodonga olungemva kweTV
Imifanekiso kunye nemibono yolwakhiwo lwangaphakathi
Imifanekiso yegumbi lokuhlala ezimfusa
Iphaseji kunye newayala
Imifanekiso kunye nemibono yendlela kunye neecalaor
Iifoto kunye nemibono yendlu enegumbi elinye
Imifanekiso yezindlu zanamhlanje ezineephuli zokubhukuda
Ukucwangcisa kunye nokubekwa komhlaba kwindawo yegadi
Ikhethwe nguPride My Photo Contest
U-Ivan Dimitrov ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
Anya Gyoreva ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
Steli Nikolova ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
UStefka Anestieva ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
UBoryana Georgieva ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
USteisi An ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
Kalinka Stoilova ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
Desi Ivanova ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
I-Asia Doikova ………. Imifanekiso ekhethiweyo yabathathi-nxaxheba evela kuMy
Amakhonkco ekhandlela kunye nezibane
Iimfama kunye namakhethini
Ukucwangciswa kokutya kunye nokuhombisa
Ukukhawuleza, kulula, kumnandi!
Spaghetti / Ipasta
Iindlela zokupheka ze-Ista
Izindlu / iVillas
Iziphumo ze: izibane
Ukuhonjiswa kwekhandlela lekrisimesi
Iimbono ezine zeKrisimesi zokuhombisa ngombala ngeKhandlela.
Zenzele isibane seoyile
Idangatye lendalo lihlala lidala intuthuzelo ekhaya kwaye linako
Ukuhonjiswa kwezibane zephepha
Nazi ezinye zeembono ezintle zokuhlobisa isibane. Njani?
Ukuhonjiswa okuhle kwigumbi lokulala
Ezinye zeembono ezintle kakhulu zokuhombisa kwigumbi lokulala. Ukwazisa
Ezinye iimbono zokuhombisa itafile
Khetha isitayile sakho! Sikunikezela ngobuhle obugqwesileyo nobuhle
I-Halloween yiholide ebhiyozelwa ngo-Oktobha 31 ubukhulu becala
Ezinye zeembono zezibane ezikhanyayo kunye nezibane
Ukukhanya kwekhandlela kudala imeko eyodwa yothando kunye nothando. Nini
Izibane ezikhulu ngePottery uBarn
Wamkelekile ihlobo kunye nezixhobo zebhotile ethandwayo yePottery. Ikhonkco laseMelika
Umbane yinxalenye ebalulekileyo yangaphakathi. Ukusuka kukhetho olufanelekileyo lwe
Ngaphandle kwamathandabuzo, igadi entle kungekuphela ngexesha lasemini,
Imibono yokuhlobisa igadi entsha. Iingcebiso ezinomdla njani
U-Elitis no-Lady Jane
IISICWANGCISO ZOKUQHUTYWA KUNYE NESISEKO SEKhaya
Ubucwebe beLady Jane
Art Studio - iglasi enamabala
I-Bubble Studio-Izixhobo ze Knit
Khangela kugcino - Khetha inyanga - NgoFebruwari 2020 NgoJanuwari 2020 NgoDisemba 2019 NgoNovemba 2019 Ngo-Oktobha 2019 NgoSeptemba 2019 Nge-Agasti 2019 NgoJulayi 2019 NgoJuni 2019 Ngamana i-2019 Epreli 2019 NgoMatshi 2019 NgoFebruwari 2019 NgoJanuwari 2019 NgoDisemba 2018 Ngo-Oktobha 2018 NgoSeptemba 2018 Nge-Agasti 2018 NgoJulayi 2018 NgoJuni 2018 Ngamana i-2018 Epreli 2018 NgoMatshi 2018 NgoFebruwari 2018 NgoJanuwari 2018 NgoDisemba 2017 NgoNovemba 2017 Ngo-Oktobha 2017 NgoSeptemba 2017 Nge-Agasti 2017 NgoJulayi 2017 NgoJuni 2017 Ngamana i-2017 Epreli 2017 NgoMatshi 2017 NgoNovemba 2016 NgoJulayi 2016 NgoJuni 2016 Ngamana i-2016 Epreli 2016 NgoMatshi 2016 NgoJanuwari 2016 NgoDisemba 2015 NgoNovemba 2015 Ngo-Oktobha 2015 NgoSeptemba 2015 Nge-Agasti 2015 NgoJulayi 2015 NgoJuni 2015 Ngamana i-2015 Epreli 2015 NgoMatshi 2015 NgoFebruwari 2015 NgoJanuwari 2015 NgoDisemba 2014 NgoNovemba 2014 Ngo-Oktobha 2014 NgoSeptemba 2014 Nge-Agasti 2014 NgoJulayi 2014 NgoJuni 2014 Ngamana i-2014 Epreli 2014 NgoMatshi 2014 NgoFebruwari 2014 NgoJanuwari 2014 NgoDisemba 2013 NgoNovemba 2013 Ngo-Oktobha 2013 NgoSeptemba 2013 Nge-Agasti 2013 NgoJuni 2013 Ngamana i-2013 Epreli 2013 NgoMatshi 2013 NgoFebruwari 2013 NgoJanuwari 2013 NgoDisemba 2012 NgoNovemba 2012 Ngo-Oktobha 2012 NgoSeptemba 2012 Nge-Agasti 2012 NgoJulayi 2012 NgoJuni 2012 Ngamana i-2012 Epreli 2012 NgoMatshi 2012
Iimpawu zobugcisa lupapasho loyilo lwangaphakathi lwe-elektroniki oluya kuthi lubonise izinto ezintsha kunye nomtsha ngaphakathi kunye nomhlobiso wegadi. Imibono enomdla ekhaya.
Siza kukunceda ngeengcebiso zobugcisa kunye neengcebiso ezisebenzayo.
Yonwaba kwaye uvumele umoya wokudala ukuba ukoyise ngokupheleleyo!
Malunga nathi »
Yonwabela isitayela esahlukileyo kunye nobuhle, intsebenzo eyahlukileyo kunye nokufudumala, ukuvumelana phakathi kwemibala kunye neemilo. Ikhaya ngalinye linokuba yindawo emnandi nenomtsalane, enomtsalane kunye nokukhetha iindwendwe kwangaphambili.
Igalari yobugcisa beSatto yigalari efumaneka kwi-Intanethi - iglasi engonakalanga и ukupeyinta kweoyile.
Malunga neegalari zeSatto Art »
Isitudiyo seSatto sobugcisa
I-Satto yeArt Studio -iglasi yombhali Iglasi epeyintiwe.
Ukuba isimo sengqondo sobungcali yifilosofi yenkampani, ke ukuvelisa izinto ezintsha kunye nembono ngamagama aphambili kwindlela yokusebenza komsebenzi omtsha. Eyona nto iphambili kwi Sitato Art kukugcina incasa ethandwayo yokwenza imifanekiso eyahlukileyo kunye nemisebenzi engalibalekiyo yobugcisa.
Malunga ne-Satto Art Studio »
Iifestile zeglasi enamaglasi ngaphakathi.
Izisombululo zangaphakathi zobugcisa.
Iglasi engagugiyo luhlobo lweglasi enamabala kwindlela yeglasi epeyintiweyo kwaye ngumsebenzi owahlukileyo wokubhala. Yenziwe ngesandla, iglasi nganye enamabala icingelwa ikopi enye. Le projekthi imiselwe ngokokukhethwa komntu ngamnye kwaye ihambelana ngokupheleleyo nokungaphakathi.
© 2012-2020 Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
UMgaqo-nkqubo wabucala Imigaqo yokusebenzisa Abaqhagamshelwa kunye nentengiso